China Manufacturer High ọcha Nitrogen Equipment PSA nitrogen Generator Generator na ndị na-eweta ya | Ma ọ bụ
Emeputa High Ọcha Nitrogen Equipment PSA Nitrogen Generator
PSA nitrogen generator, PSA Oxygen purifier, PSA nitrogen purifier, hydrogen generator, VPSA oxygen generator, VSA oxygen generator, Membrane oxygen generator, Membrane nitrogen generator, Liquid (cryogenic) oxygen, nitrogen na argon generator, wdg, a na-ejikwa ya n'ọtụtụ ọrụ nke mmanụ ala, mmanụ & gas, Chemicals, electronic, metallurgy, coals, pharmaceuticals, aerospace, autos, iko, plastik, nri, ọgwụgwọ, ọka, mining, cutting, ịgbado ọkụ, ihe ọhụrụ, wdg Na afọ nyocha na ikuku nkewa teknụzụ na ọgaranya ngwọta ahụmahụ dị iche iche ọrụ, ruo na-enye anyị na ndị ahịa na ndị ọzọ a pụrụ ịdabere na, ọzọ echekwa, ihe adaba ọkachamara gas ngwọta.
A na-ewu ndị na-emepụta nitrogen dịka ụkpụrụ nke ọrụ PSA (Adsorption Swing Adsorption) ma ọ dịkarịa ala nke ndị na-adọrọ adọrọ abụọ jupụtara na sieve molekụl. Ndị na-adọrọ ihe na-agafere site na ikuku ikuku (nke e mere ka ọ dị ọcha iji wepụ mmanụ, iru mmiri na ntụ) ma mepụta nitrogen. Mgbe arịa, nke ikuku ikuku jikọtara na-emepụta gas, nke ọzọ na-agbanwe onwe ya na-efunahụ ikuku ndị gas gara aga. Usoro a na-abịa ugboro ugboro n'ụzọ cyclical. Ndị na-enye ọkụ na-ejikwa PLC.
PSA Nitrogen Generator bụ ngwa ọrụ ọgbọ nitrogen na-anabata sieve carbon molekụl dị ka adsorbent - nrụgide adsorption na agụụ nke ikuku oxygen site na ikuku, na-ebute nkewa nke nitrogen.
Carbon molekụl sieve's O2 na N2 adsorption properties na ịba ụba nke adsorption mgbali na-eme ka O2, N2 adsorption ike mụbara, na adsorption ọnụego nke O2 dị elu. Ngwunye nitrogen PSA na-eji ihe ndị a nke nitrogen, oxygen na CMS eme ihe. Mana nke a ezughi, a ga-atụle ọtụtụ ihe ma jikwa ya mee ihe kachasị mma - nke a bụkwa ihe mere PSA nitrogen generators na-anabata ya wee bụrụ ihe ama ama n'ụwa n'ihi na-eme ihe niile kacha mma. PSA okirikiri dị mkpụmkpụ - O2, N2 adsorption na-amalite site na nhazi / nrụgide nrụpụta, mana O2, N2 mgbasa / desorption ọnụego dị iche na O2 adsorption ikike na obere oge dị elu karịa ikike adsorption nke N2. PSA nitrogen ọgbọ technology na-eji carbon molekụla sieve si adsorption e ji mara, na ụkpụrụ nke pressurized adsorption, desorption decompression okirikiri - na abịakọrọ ikuku alternately na-aga abụọ adsorption elu iji nweta ikuku nkewa, si otú amị a na-aga n'ihu eruba nke ngwaahịa nitrogen. Agbanyeghị ịmara ndị a ezughi - mepụtara ihe ndị a niile kacha mma na PSA nitrogen generators.
Nke gara aga: Igwe nkpuchi nitrogen eji eri nri maka ulo ahia nri Nri nitrogen Generator
Osote: Top mma PSA oxygen osisi maka ire ọkụ na ndịda America ọwụwa anyanwụ Asiawith mma obi ike nke elu arụmọrụ
Ọdịdị dị elu Nitrogen Na-amụba Usoro
High Ọcha Nitrogen Generator
Top Quality High arụmọrụ Liquid
Nkọwapụta Nkọwa (Nm³ / h) Nri oriri gas (Nm³ / h) usoro nhicha ikuku ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 Anyị na - arụ PSA oxygen osisi site na iji PSA kachasị ọhụrụ ( Nrụgide Ngabiga Mgbakwunye) teknụzụ. Leabụ ihe lea ...
Uru Uru 1 ： Ofụri Esịt Automatic Rotary Air Compressor. 2, Dị nnọọ obere ike oriri. 3, ： chekwaa mmiri dị ka ikuku Compressor na-eme ka ikuku dị mma. 4 ： 100% igwe anaghị agba nchara ewu kọlụm dị ka ASME ụkpụrụ. 5, Oxygen dị ọcha maka ọgwụ / ụlọ ọgwụ. 6, Skid n'ịnyịnya version (Ọ dịghị ntọala achọrọ) 7, Ndenye mmalite na Mechie tim ...
Uru ahịa Anyị na-eburu ụzọ mbukota dị iche iche dịka ihe achọrọ si dị. A na-ejikarị akpa ndị a ekpuchichiri na igbe osisi mee ihe maka mmiri na-enweghị mmiri, uzuzu na ujo na-egosi, na-achọpụta na akụrụngwa ọ bụla na-anọgide n'ọnọdụ zuru oke mgbe nnyefechara Na usoro nke lọjistik, ụlọ ọrụ nwere nnukwu ụlọ nkwakọba ihe ...